OpenTESArena: kuvhurazve kuzadzikiswa kweiyo Vakuru Mipumburu: Arena | Linux Vakapindwa muropa
OpenTESArena yakavhurika sosi reimplementation yeiyo Vakuru Mipumburu: Arena. Iyo yakafuridzirwa nemapurojekiti akafanana seOpenXcom uye OpenMW. Iyi inonakidza yemagetsi injini ine kuburitswa kutsva nekumwe kugadzirisa. Chinangwa cheichi chirongwa ndechekuti uve wakachena, muchinjika-chikuva vhezheni, uye zvinoita kunge iri kushanda. Asi kuchine zvakawanda zvezvinhu zvinoda kuitiswa isati yatamba zvakakwana kuti inakidze.
Sezvandambotaura, zvinobva open source, saka kana iwe uchifarira kuiwana, ona iyo kodhi kodhi, uye kana kutobatsira mukusimudzira uku, unotoziva kuti unogona kuzviita kubva GitHub. Ikoko iwe unowana zvakare ruzivo uye zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo projekiti uye mugadziri wayo.
Kune avo vasingazive kuti ndezvei Vakuru Mipumburu: Arena, uye nekudaro havanyatso kuziva kuti chii chavanozowana neiyi projekiti, kutaura kuti yaive mutambo-wekutamba mutambo wevhidhiyo kubva muna 1994 kune Microsoft's MS-DOS operating system. Vanoda zvechinyakare vanga vachimhanyisa pane emulators pane mamwe mashandiro emazuva ano ekushandisa, kuitira kuti vadzikise chishuwo chavo uye vakwanise kutamba mitambo mishoma mukukudziridzwa kweBethesda Softworks.
Chakaita kuti ive yakakosha panguva iyoyo chaive rusununguko rwakapihwa uyu mutambo wevhidhiyo, zvisati zvamboonekwa mune mamwe mazita enguva. Mutambi anogona kufamba achitenderera humambo hwese achiita chero chaaida, ndiko kuti, semitambo yazvino yakavhurika yezvose. Zvinogona kubva pakupinda mumakomba, kubatsira vagari, kuchengetedza mufambi, kutsvaga basa, kurwa, nezvimwe. Iyo yakazara hombe dhijitari nhanho yauinayo iwe izvozvi iwe unogona zvakare kuvimba neLinux nekuda kweOpenTESArena ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » OpenTESArena: kuvhurazve kuzadzikiswa kweiyo Vakuru Mipumburu: Arena
nmap: Mienzaniso yeMitemo Inobatsira